आइडलका प्रतियोगीको सातो कसले उडायो ? Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
आइडलका प्रतियोगीको सातो कसले उडायो ?
काठमाडौँ : नेपाल आइडल सिजन ४ अहिले गाला राउन्डमा छ। यही राउन्डमा शुक्रवार १२ प्रतियोगीमध्ये ६ जनाले प्रस्तुति दिए।
सुरेश लामा, बेनिसा पौडेल, राजकुमार परियार ,सुमेन पाख्रिन, भूपेन्द्र थापा मगर अनि विश्वास उप्रेतीको प्रस्तुति हेर्दा जज सुगम पोखरेलले सत्य नै भने' सातो गएका प्रतियोगी।'
अधिकाशं प्रतियोगीको प्रस्तुति जमेन। सुरेश लामा भने जमे। पहिलो गोल्डन माइक विजेता राजकुमार फ्लप भए। विश्वासले विश्वास बढाउन अझै काम गर्न बाँकी छ। अन्यको प्रस्तुति ठिकठिकै भो।
गजब चैँ सुरेशले गाए। तीनै जज उठेर सम्मान गरे। सुमेन, भूपेन्द्रले एभरेज गाए। त्यही भएर जज सुगमले भने 'सबै प्रतियोगी किन सातो गएका झैँ देखिएका?' भोलि टप १२ मध्ये बाँकी ६ जनाले प्रस्तुति दिनेछन्। त्यो पनि उस्तै हुने पो हो कि !
२०७८ माघ ०१ गते ०:१४ मा प्रकाशित